‘कोरोनाकै कारण आत्महत्यादर बढ्यो भन्नु गलत – डा. रवि शाक्य « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
‘कोरोनाकै कारण आत्महत्यादर बढ्यो भन्नु गलत – डा. रवि शाक्य
कोरोनाभाइरस कोभिड–१९ महामारीसँगै नेपालमा आत्महत्यादर २० देखि ३० प्रतिशतले तथ्यांक प्रकाशमा आएको छ । विभिन्न अध्ययनले नेपालमा आत्महत्यादर बढेको देखाएको हो । पाटन अस्पतालका निर्देशक एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ डा। रवि शाक्य ६ महिनाको तथ्यांकलाई हेरेकै भरमा कोरोना महामारीका कारण नेपालमा आत्महत्या दर बढेको मान्न नसकिने बताउँछन् ।
एक–एक महिनाको तथ्यांक केलाएर हेर्ने हो भने विगतको तुलनामा कुनै महिना कम संख्यामा आत्महत्या भएको पनि पाइएकाले कोरोना महामारी कै कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्यो भनेर भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । कोभिड १९ का कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्यो भन्नका लागि तथ्य र प्रमाण थप केलाउनुपर्ने डा। शाक्य बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय भएको आत्महत्याका बारेमा गहन अध्ययनपछि मात्र हामी बोल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर आत्महत्यादर बढी भएकै देशमा नेपालको गणना हुन्छ ।’
विश्वमै आत्महत्या गरेका ९० देखि ९५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै किसिमको मानसिक रोगबाट ग्रस्त हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको विज्ञहरुको भनाइ छ । नेपाल वार्षिक रुपमा झण्डै ६ हजार जनाले आत्महत्या गर्छन् । प्रत्येक दिन सरदर १६ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पछिल्लो ५ महिनाको अवधिमा दैनिक सरदर २० जनाले आत्महत्या गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । यस अर्थमा आत्महत्या दर सरदर २० प्रतिशत बढेको देखिन्छ । आत्महत्या गर्ने ८५ प्रतिशत मानसिक बिरामी हुन्छन् । तर मानसिक रोगको कारण के हो, मृतकमा कस्तो खालको मानसिक समस्या थियो वा उसले कुन कारणले आत्महत्या ग(यो भन्नेबारे नेपालमा विस्तृत अध्ययनसमेत नहुने डा। शाक्यले बताए ।
नेपालमा आत्महत्याको तथ्यांक दिने निकाय नेपाल प्रहरी नै हो । प्रहरीले आत्महत्याकर्ताको परिवारका सदस्यलाई सामान्य सोधपुछ गर्ने र के कारणले आत्महत्या ग(यो भनेर जानकारी लिने औपचारिकता पूरा गरेर मानसिक अस्वस्थताकै कारण आत्महत्या भएको निश्कर्ष निकाल्छ । स्वास्थ्यकर्मीको दृष्टिबाट हेर्दा ५र७ प्रतिशतमात्रै परिवार र प्रहरीले मानसिक रोग र समस्याको बारेमा बुझेको पाइन्छ । मृतक कस्तो खालको मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेको थियो, त्यस्तो समस्या कसरी सिर्जना भयो र आगामी दिनमा परिवारका अन्य सदस्यमा त्यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्नका लागि के गर्ने लगायतका विषयलाई वास्ता गरिँदैन ।
मानसिक रोग के हो रु कस्ता–कस्ता समस्या देखापर्छ रु कस्तो खालको मानसिक समस्या हुँदा आत्महत्या गरेको हो भन्ने बारेमा प्रहरी तथा समुदायलाई कम जानकारी हुने गरेको डा। शाक्य बताउँछन् । त्यसैले कोरोनाभाइरस कै कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा नेपालमा आत्महत्या गर्ने मानिसको संख्या बढ्यो भन्न गाह्रो हुने उनले बताए । हरेक वर्ष बढ्दो आत्महत्यालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सेप्टेम्बर १० लाई विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउने गरिन्छ ।
कोरोना महामारीकै कारण लामो समयसम्म लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा कयौंले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यसरी रोजगारी गुमाउनेहरु स्वाभाविक रुपमा बेचैन हुन्छन् । गत जुलाई महिनामा गरिएको एक अध्ययनले करिब ६१ प्रतिशतले माहामारीका कारण आम्दानी र जीविकोपार्जनका बाटो गुमाएको देखाउँछ । त्यसैले मानिसहरू मानसिक तनावमा छन् । कोरोना संक्रमणकै कारण कतिले आफन्त गुमाएका छन् भने कतिले चिनजानका नजिकका मानिस गुमाएका छन् । यस्ता परिस्थितिले मानिसमा तनाब बढाउने भएकाले नै कोरोना संक्रमण कै अवधिमा आत्महत्या दर बढ्यो भनेर भनिएको हुन सक्ने डा। शाक्य बताउँछन् ।
डा। शाक्यका अनुसार सबैभन्दा पहिला आफूलाई के कुराले तनाव दिएको हो, त्यो पत्ता लगाउन जरुरी हुन्छ । पछिल्लो समय माम, दाम र काम नपाउँदा धेरै नेपालीलाई तनावले सताएको उनी बताउँछन् । तनाव व्यवस्थापन गर्ने पनि विभिन्न तरिका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कोहीले सकारात्मक र कोहीले नकारात्मक तरिकाबाट तनाव व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । हामीले सकारात्मक तरिकाले तनावसँग सघर्ष ग¥यौँ भने तनावलाई जित्छौँ ।’
तनाव भगाउन डा। शाक्यका केही टिप्स
प्रकाशित मिति : भाद्र २५, २०७७ बिहीबार ८ : ०५ बजे